महोत्सवमा ठगिए कलाकार! पारिश्रमिक माग्दा ज्यान लिने धम्की - सुदूर नेपाल
महोत्सवमा ठगिए कलाकार! पारिश्रमिक माग्दा ज्यान लिने धम्की
Dinesh khaptadi June 12, 2019 0
कालिकोटले आयोजना गरेको युवा जागरण अभियान कार्यक्रमकाे प्रथम रास्कोट महोत्सवमा आयाेजकद्वारा कलाकारहरु ठगिएकाे पाइएकाे छ । कालिकाेटकाे रासकाेट नगरपािलकामा बैशाख २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म चलाइएको रास्कोट महोत्सवमा गएका कलाकारहरु आयाेजकबाटै ठगिएकाे कुरा खुल्न आएकाे हाे । आयाेजकले कार्यक्रम सकेर कलाकारलाई विदाइ गर्दा सम्झाैता विपरित खालि हात फर्काएका हुन् । खाल हात फर्काउने भएपछि कलाकारसँगकाे सम्झाैता अनुसार पारिश्रमिक माग्दा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिएकाे एकजना कलाकारले बताएका छन् । पारिश्रमिक माग्दा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिएकाे स्थानीय कलाकार अमर थापाले सत्कार पाेष्टलाई बताएका हुन् ।थापाले आक्राेसित हुँदै भने ‘आयोजक टिमले पारिश्रमिक त परै जाओस आउने जाने भाडा सम्म नदिएपछि कलाकारको बिचल्ली भयाे ।उनका अनुसार महोत्सव सुरु हुनुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण कलाकारहरुलाई निश्चिति पारिश्रमिक तोकिएको थियाे तर कार्यक्रम सकिएपछि भने खालि हात फर्काइएककाे हाे । बाेलाइएका कलाकार मध्ये रेखा जाेशीले मात्रै पारिश्रमिक पाएकी छिन् अन्य सबै कलाकारहरू ठगिएकाे बताइएकाे छ । महोत्सवमा केन्द्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूलाई बाेलाउने सम्झौता गरी सम्पूर्ण कलाकारहरुको रेडियोमा जिङगल समेत बजाएपनि मुख्य-मुख्य कलाकारहरू समेत नबाेलाइएकाे गुनासाे स्थानीयले गरे । स्थानीयका अनुसार टिकट बिकाउनकै लागि मात्रै टीका पुन लगायतका कलाकारकाे प्रचारप्रचार गरियाे । तर उनीहरूलाई बाेलाइएन । स्थानीयले भने ‘भ्रम श्रृजना गरी पैसा कुम्ल्याउने मेलाेमेसाे गरेकाे पाइयाे, हामीमाथि जालसाजी भयाे । रासकाेट महाेत्सवकाे अध्यक्षता सुरेश शाहीले गरिरहेका थिए भने कार्यक्रम आयाेजना गर्नमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नेमा प्रकाश सुनार र पबित्र शाही लगायत व्यक्ति रहेकाे बताइएकाे छ ।
पारिश्रमिक माग्दा ज्यान मार्ने धम्की
काठमाडाैंमा संगीत कर्म गरिरहेका कालिकाेट रासकाेट निवासी अमर थापालाई युवा जागरण अभियान कालिकोटले आयोजना गरेको कार्यक्रमकाे लागि निमन्त्रणा आयाे । उनले व्यस्तताकाे बाबुजुद आफू जान नसक्ने बताए । तर प्रकाश सुनार र पबित्र शाहीले कर गरेरै भने ‘तपाइँ स्थानीय कलाकार पनि हाे, स्थानीय ठाउँमा जानुपर्छ, तपाइँलाई राम्रै व्यवस्था गरिदिन्छम, यताउता गर्ने गाडी भाँडा, खान बस्न बाहेक १० हजार रूपैयाँ दिन्छाैं, जसरी पनि तपाइँले हाम्राे कार्यक्रमकाे शाेभा बढाइदिनु पर्यो।’ भनेपछि आफू कन्भिन्स भएकाे बताउँछन् । कार्यक्रम सकिएपछि आफ्नाे कर्म थलो काठमाडौ फर्किने तयारी गरे तर आयाेजक टिमले फर्काउने कुनै संकेत दिएन, उनी आफैले आयाेजक टीमका अध्यक्ष सुरेश शाहीसँग कुरा गर्न तम्सिए । उनले तपाइँ यताबाट जाँदै गर्नुस सुर्खेतमा व्यवस्था गरिदिन्छम भनेर सुर्खेततिर पठाए । सुर्खेत पुगेर अध्यक्ष शाहीलाई फाेन सम्पर्क गरे । पारिश्रमिककाे पैसा आउनुभन्दा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की आयो । एक्कासी यसरी पारिश्रमिक माग्दा ज्यान मार्ने धम्की आएपछि उनी छाङ्गाबाट खसेजस्तै बने । यात्राकै क्रममा हुँदा प्रहरी केश गर्ने कुनै मेसाे पाएनन् ।
धम्की हाेइन, पारिश्रमिक पछिदिने कुरा भ’काे हाे
यस विषयमा बुझ्न खाेज्दा कार्यक्रमका अध्यक्ष सुरेश शाहीको माेबाइल अफ थियो । तर एकजना उक्त कार्यक्रमकै सदस्य प्रकाश सुनारसँग टेलिफाेन सम्पर्क गरी बुझेका थियाैं । उनले यस विषयमा प्रतिक्रया दिदै भनेका छन्- ‘कार्यक्रमबाट अपेक्षाकृत रकम उठाउन नसकेपछि स्थानीय कलाकारलाई विस्तारै रकम दिने कुरा भएकाे हाे । पारिश्रमिककाे विययलाई लिएर ज्यान मार्ने धम्की दिएकाे कुरा मलाई छैन् । अध्यक्षको फाेन अफ छ म आफै यस विषयमा अनविज्ञ छु । उ भाइलाई पारिश्रमिक दिने नै हाे, हामी पनि ऋणमै भएकाेले तत्काल दिन नसकेपछि, पछिदिने कुरा भएकाे हाे ।सत्कार अनलाईन बाट साभार
Previous Post: शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोहि बंचित नहुने-अध्यक्ष साउद
Next Post: बाघको आक्रमणबाट एक जना घाइते